Manome Aina Vao ny Hira Malefaka Any Zeorzia Sovietika Teo Aloha Ao Amin’ny Ranomasina Mainty · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Septambra 2015 5:05 GMT
The Natural Born Lovers eo am-piketrehana. Sary nampiasaina nahazoana alàlana.
Lahatsoratra fiaraha-miasa avy amin'ny EurasiaNet.org nosoratan'i Paul Rimple ito manaraka ito. Naverina nalefa miaraka amin'ny fahazoan-dàlana.
Notsofiko irery tamin'ny faràra ilay hira malefaka malaza “Walking By Myself” an'i Jimmy Rogeron, tamin'ny sehatra kely natao maimaika tao amin'ny hotely iray tao amin'ny tanàna Ureki misy torapasika maloto ao Zeorzia. Olona miisa 25 misolotena an'ireo mpitondra eo an-toerana no mpijery mipetraka eo amin'ny latabatra lava iray, mihinana mtsvadi sakafo nentin-drazana (hena natsatsika, masikitan-kisoa),khachapuri (mofo misy fraomazy) ary saladinà voatabia sy kaokaombra. Mihaino tsara ny fampisehoan'ny tarikay izy ireo.
Tsy mora ny mahazo olona mpihaino mitia ny hira malefaka any Zeorzia. Manome vahana kokoa ny fizahan-kira na olona roa mpihira ireo hira mihetsika mampahatsiahy ny vanim-potoana Sovietika ireo toeram-pisakafoana. Miandry ireo mpihira mahavita ny hira malaza sahala amin'ny “Pretty Woman,” “Another Brick in the Wall” an'i Pink Floyd ary “Tears in Heaven” an'i Eric Clapton ny ankamaroan'ireo tomponà trano fisotroana.
Tsy mihira ireny hira ireny izahay, sady tsy manova endrika amin'ny Raybans, satroka mainty ary karavato mahia mainty. Nilalao tao aminà toeram-pisakafoana vitsivitsy izahay, fa tsy mahay mihaino ireo mpihinana khinkali (hena baolina), kanefa ny hira malefaka karazana hira tokony ifampitàna zavatra.
Any Ureki, mipetraka sy mihaino anay sahala amin'ny mijery televiziôna ireo vahiny mahalala fomba, olona eo amin'ny salan-taona antonony avy any Rosia, Armenia ary Tbilisi renivohitra, . Farafaharatsiny mandihy ireo ankizy, izay mpijery tsy mandainga indrindra eto an-tany.
Ny mpivelinay, David Manizhashvili, nanandrana ny hampiditra ahy efa hatry ny taona maro ho ao anatin'ny vondrona misy anay ankehitriny, “The Natural Born Lovers” ( Ireo Mpitia Natoraly Hatrany An-kibo), any Ureki, toerana ambany mitoetra eo anelanelan'ny fiantsonan-tsambon'ny Ranomasina maintin'i Zeorzia ao Poti sy Batumi. Fa nizara efitra kely sy toeram-pidiovana niaraka tamin'ireo namako efatra mierotra tao amin'ny toerana iray fialana sasatra aho tany aloha. Nanana asa ihany koa aho ny andro, ary tena mitandrina tsara amin'ireo fampisehoana ataoko.
Ireo mpikambana tao amin'ny tarika Zeorziana misy ahy anefa, tsy nanana izany. Afa-tsy ilay mpitendry gitaranay, Tamaz Tkhinvaleli, izay manana fivarotana mofo kely tao amin'ny tanàna, manao ny filalaovana mozika ho toy ny fidiram-bola iainana izy ireo, ary mandray 30 na 40 laris (manodidina ny $13-$17) ny alina iray.
Nifampizara sehatra tamin'ireo mpanao hatsikana, vehivavy mpandihy, mpanao fanatanjahantena tsy dia malaza loatra ary mpitarika fotoana tsy dia mahay loatra ny The Natural Born Lovers , fa mahita ireo olona maro mpihinana hena baolina ho sarotra entanina. Sary nampiasaina nahazoana aàlana.
Fa na miaraka amin'ireo vehivavy roa mpihira aza, i Nino Glonti sy i Bako Alania, izay afaka manome hira malaza mifandraika kokoa amin'ny fitiavan'ireo mpijery eo an-toerana, vitsy ihany ireo asa tao anatin'ireo volana lasa ireo.
Kanefa, io eo Ureki. Fa farafaharatsiny mba nahazo efitra manokana ho ahy samirery aho tamin'ity indray mandeha ity.
Ny volana Aprily 2012 no fotoana farany nitoerako tao amin'io tanàna io. Tonga tany aho mba hitatitra ny tantara momba ny tsindry nataon'ireo tomponandraiki-panjakana any amin'ny faritr'i Guria tamin'ireo mpikambana amin'ny antoko mpanohitra mba hifidy ny hanohitra ny fiaraha-mitantana Nofinofin'ny Zeorziana amin'ireo fifidianana ny solombavambahoaka ho avy. Lasa governemanta ankehitriny ireo mpikambana amin'ny mpanohitra omaly io taorian'ilay fifidianana, fa toa izay ihany amin'ny ambangovangony no niova tao Ureki.
Mbola mijanona ho iray amin'ireo faritra mahantra indrindra ao Zeorzia i Guria, miaraka amin'ny 54,8 isanjaton'ireo mponina vinavinaina ho miisa 113.221 miaina ambanin'ny tahan'ny fahantrana, araka ny antontanisan'ny Banky Iraisampirenena. Toe-javatra maneso izany, ireo olona roa manankarena indrindra ao Zeorzia, ilay Praiminisitra teo aloha manankarena an-davitrisany maro, Bidzina Ivanishvili, sy ilay manankarena an-davitrisany efa maty ,Badri Patarkatsiashvili, nanamboatra torapasika any Ureki, ampahany kely amin'ny Ranomasina Maintin'i Guria.
Tena miankina amin'ny fivoaran'i Ureki ny firoboroboan'ny toekaren'i Guria, fa hatreto aloha mbola mitovy tamin'ilay endriny tamin'ny fanombohan'ny taona 2000 fony aho nitsidika tany ihany ilay toerana. Lalana kely mamotaka feno lavadavaka no lalàna fototra ho an'ny tanàna, ary manimba ny torapasika mainty izay mampalaza an'i Ureki ireo fako.
“Tsy misy fotodrafitrasa eto. Raha nisy izany, hampiasa vola eto ny olona,” hoy i Khatuna Lagazidze, ilay olona miteny Anglisy, iray amin'ireo tompon'ny Kolkhidze Sanatorium, ny mpampiantrano sy mpampiasa ny tarikay.
ilay tarika eo am-piresadresahana. Sary nampiasaina nahazoana alàlana.
Nisokatra tamin'ny taona 1970 ilay toerana teo amoron-dranomasina, nalaza teo amin'ireo olom-pirenena Sovietika, izay nino fa tsara ho an'ny “rheumatoid arthritis”, paralizia, fiakaran'ny tosi-drà ary ireo karazana aretina maro ilay fasika tsy dia fahita loatra, any Ureki. Fa ny faharavan'ny kaominisma sy ny fitotongànana nandetika an'i Zeorzia tao anatin'ny fahasimbana ara-tsosialy sy ara-toekarena dia niteraka fahafatesana ho an'ireo toerana fialàna sasatra sy ho an'ny fitsaboana nanerana ny firenena, tafiditra amin'izany i Kolkhida.
Samy avy any Tbilisi i Lagazidze sy Amiran vadiny, nividy ilay hotely ny tapatapaky ny taona 1990 ary nanamboatra azy io, tafiditra tamin'izany ny torapasika manokana madio. Nefa, mazava tsara saika eny anivon'ny toerana fisintahana tantanan'ny fianakaviana tsirairay ao amin'ny firenena mihitsy ny lasan'ny kaominista tao Zeorzia fahiny, toerana izay manome tolotra feno misy sakafo in-telo isan'andro. Ampahany amin'ilay fehezana ihany koa matetika, araka ny dikanteny mazava, ny dokam-barotra .
Nizara ny sehatra tamin'ireo mpanao hatsikana, vehivavy mandihy , mpanao fanatanjahantena tsy dia malaza loatra ary mpitarika fotoana tsy dia mahay loatra ny tarikay. Afaka manao fampisehoana tsy azo vinavinaina araka izay itiavan'i Federico Fellini azy io.
Tamin'ny fampisehoana nandritra ny fialantsasatry ny Taom-Baovao tao Bakuriani, toerana malaza ho an'ny fialantsasatra fohy rehefa fotoanan'ny ririnina any amin'ny Toerana Ivan'i Zeorzia, nisy olona mamo iray, tezitra fa tsy nilalao ny Tracy Chapman aho, nisintona ny “micro”-ako ary nanomboka nanao ny hiran'i James Brown, ilay hoe “I Feel Good.” Izany ny taona izay nametrahan'ireo mpampiasa anay tao aminà hotely antitra iray maloto, tsy misy fitaovana manome hafanana sy lamba hifafàna avy mandro na fitaovana fidiovana akory. Nianiana ny tsy hilalao tao Bakuriani intsony aho.
Tsy dia ratsy loatra i Kolkhida. Tia hanome zavatra afaka tian'ny fianakaviana manontolo izy. Ho fanampin'ny tarikay, nisy MC iray tanora misavoritaka, izay nampiantrano “karaoke” sy “mpanao majika” iray, Zurab Vadachkoria, nanao fampisehoana kely nisy ilay finday tao anaty tavoahangy plastika.
Raha tsy dia taitra loatra ireo mpijery, izahay kosa nilalao mafimafy kokoa. Satria izahay manao karazana Slim Harpo, tafiditra am-paosy mora ireo bahan-kira mihetsika, mialoha ny hanaovan'i Tamaz, ny mpitendry gitaranay, ny filalaovana samireriny.
Indraindray ahazoam-bola io. Mbola tia ny hiverenanay indray i Kolkhida amin'ny fotoam-pahavartara manaraka, ary nilaza tamiko ny mba hitondrako miaraka amiko ihany koa ny fianakaviako.